Momba anay | Xuzhou Hoyer Glass Technology Co., Ltd.
Hoyer Glass dia fanafohezana ny fiaraha-miasa avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanehoan-kevitry ny mpanjifantsika Michael. Hoy ny fitaratra hoyer dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana, ny tsena ary ny varotra amin'ny karazan-tsasatra rehetra. Amin'ny maha matihanina sy mpihazakazaka mialoha ny indostrian'ny fitahirizan-tsolin'i Shina, Ankehitriny, miasa amin'ny andian-dahatsoratra 11 miaraka amin'ny karazany an'arivony isika, toy ny tavoahangy makiazy, tavoahangy misotro, siny gony, tavoahangy, tavoahangy, fitoeran-tsakafo, tavoahangy. , tavoahangy fanafody, mifangaro ranom-boankazo, lovia famaky atody, lovia voankazo, kaopy, lovia ary ny vokatra hafa mifandraika amin'izany.
Hoy ny fitaratra Hoyer dia 30 fivoriambe ary ny famokarana isan-taona dia tafakatra hatramin'ny 300 tapitrisa (150,000 taonina). Manana atrikasa fanolorana fanatanjahantena 6 izay afaka manolotra ranomandry, fanaovana pirinty, fanaovana pirinty, pirinty fitety, fanoratana, vatosoa, fikapohana ny hahatanty serivisy "mijanona iray".
Ny vokatra avy dia nohamarinin'ny SGS, CE, GE, ISO sns ... ary nahazo tombony malaza amin'ny tsenan'izao tontolo izao. Ny vokarintsika dia nizara tany amin'ny firenena sy faritra 30 samihafa, toy ny Etazonia, Aostralia, Hong Kong, Afrika, Eropa, Azia Atsimo Atsinanana, Moyen Orient sy ny sisa.
Ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, vokatra avo kalitao ary serivisy serivisy dia iraka foana ataonay amin'ny orinasa. Izahay dia mandray ny namana avy ao an-trano sy any ivelany mba hitsidika ny orinasa. Miaraka amin'ny ekipa matihanina, tompon'andraikitra, mavitrika ary manana traikefa, mino izahay fa afaka manampy amin'ny orinasanao ny serivisotra miaraka aminay.